Safetylọ ọrụ nchekwa ihe nrụpụta - China Nchekwa akụrụngwa ndị nrụpụta, ndị na-eweta ya
ZYX120 Na-ekekọrịta Onwe Oxygen Self-Rescuer
Ngwa ZYX120 Isolated Compressed Oxygen Self-Reserve (dị mkpụmkpụ maka onye na-anapụta onwe ya) na-anabata oxygen gwakọtara ọgwụ dị ka isi iyi ikuku. Ọ bụ dịpụrụ adịpụ dechara circuit onwe ume usoro nke nwere ihe odide nke obere akụkụ okuku ume na-eguzogide, ala ọchịchọ nke okpomọkụ, adaba, mma ma a pụrụ ịdabere na, ike ga-reused, wdg Ọ na-ebe etinyere maka coal m na gburugburu ebe obibi ebe mmeru nsi. gas ma ọ bụ enweghị ikuku oxygen. Ndị ọrụ na-eyi ya rapidl ...
Oxygen Ngwunye ZY45
Ngwunye Oxygen nke Na-ejide Onwe Ya: ZYX45 Oge: 45 Nkeji 45 Nkeji oge ị na-egwupụta onwe ya nwere onye nnapụta onwe ya, ihe nchekwa nke onwe ya Asambodo: Akwụkwọ Mgbapụta Mgba Mgba Mgba Ala Mgbapụta Asambodo Asambodo Nnyocha ZYX45 abịakọrọ Oxygen Self-Rescue (dị mkpụmkpụ maka onwe ya) -rescuer) nakweere oxygen gwakọtara oxygen dị ka isi iyi ya. Ọ bụ dịpụrụ adịpụ dechara circuit onwe ume usoro nke nwere ihe odide nke obere ...
Oge awara Onwe onye nwere iku ume
Ngwa Mgbe ọ bụla ndị ọrụ mberede na-azọpụta ndụ ma ọ bụ na-emenyụ ọkụ, n'elu ma ọ bụ n'okpuru ala, HYZ4 (B) Ngwaọrụ Ejiri Emechi Emechiri Emechi Bata Na-abata nke ya. Ma ejiri ya n'oge nnapụta ma ọ bụ ọgụ ọgụ ọkụ na mines, tunnels ma ọ bụ ụzọ ụgbọ oloko dị n'okpuru ebe enwere gas na-adịghị mma ma ọ bụ ikuku oxygen na-ezughị ezu, HYZ4 (B) Ngwaọrụ Ejiri Ekpuchi Onwe Gị bụ nhọrọ mbụ. Ihe karịrị ndị ọkachamara ọkachamara 10,000 na-adabere na HYZ4 (B) Mmechi Onwe Onye ...
Oge Nkeji Onwe Gi Emechibidoro Ngwa
obere ngwa iku ume iku ume) (4 awa na-eku ume) iru eru: Asambodo Nchekwa Mgba Mgba Ala na-egosi Asambodo Nyocha Nyocha Mgbe ọ bụla ndị ọrụ mberede na-azọpụta ndụ ma ọ bụ na-emenyụ ọkụ, n'elu ma ọ bụ n'okpuru ala, HYZ4 Ngwaọrụ Na-eme Udiri Emechi Emechi. nke ya. Ma eji ya n'oge nnapụta ma ọ bụ ọgụ ọgụ ọkụ na mines, tunnels ma ọ bụ ụzọ ụgbọ oloko n'okpuru ala ebe enweghị gas ma ọ bụ ikuku oxygen na-adịghị mma ...
Ngwa iku ume nke onwe ya HYZ2
Dị ihe atụ: HYZ2 / HYZ4 iru eru: Coal Mine Safety Certificate Bọmbụ gbawara agba akaebe Asambodo Nnyocha Asambodo Ngwa Oge ọ bụla ndị ọrụ mberede na-azọpụta ndụ ma ọ bụ na-emenyụ ọkụ, n'elu ma ọ bụ n'okpuru ala, HYZ2 Onwe-Ya Emechiri Emechi Circuit Breathing Apparatus na-abata na nke ya. Ma ejiri ya n'oge nnapụta ma ọ bụ ọgụ ọgụ ọkụ na mines, tunnels ma ọ bụ ụzọ ụgbọ oloko dị n'okpuru ebe enwere gas na-adịghị mma ma ọ bụ ikuku oxygen na-ezughị ezu, HYZ2 Self-Contained Closed Circuit Brea ...
Ultraviolet radieshon mita UV3000
Ihe nlere: UV3000 Okwu Mmalite: UV3000 Ultraviolet radieshon mita bụ otu mbara spectral ike. A na-ejikarị ya eme ihe maka ịtụ njupụta ike ikuku ultraviolet. Ngwa ahụ bụ Uw / cm2. Ihe mmetụta dị n'elu akụrụngwa ahụ. Ọ dị mfe iji na ziri ezi na mmesho. Ojiji: Nlekọta ahụ ike na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ Na-egbochi nnwale arụmọrụ nke ihe owuwu ụlọ, ihe nkiri anyanwụ na iko na-egbochi UV na mmụba ọkụ radiation na isi iyi ọkụ ultraviolet (anyanwụ, UV la ...
Ezigbo Ihe Nlekọta Aerosol Nyochaa CCZ1000
Modeldị ihe atụ: CCZ1000 Ahịa: BJKYCJ Nkọwapụta Oge na-agụ Portable dust detector Ngosipụta ngosipụta ziri ezi, usoro ziri ezi, arụmọrụ kwụsiri ike, obere nha, ọkụ dị arọ Ngwa Ọ bụ ọgbọ ọhụụ ọhụụ na-agụ ihe na obere ntụ ntụ, ejiri iji chọpụta ịta ahụhụ niile ájá ma ọ bụ ezumike-uzuzu na gburugburu ebe ikuku ọkụ ma ọ bụ ihe mgbawa na-adị na njirimara nke ngosi dijitalụ, ihe ziri ezi, na arụmọrụ kwụsiri ike, obere nha, ìhè dị arọ, dị mfe na co ...
Digital ìhè mita luxmeter luminometer 1010C
Njirimara: 1, nnukwu nchọpụta dị iche iche, nke kachasị dị ka 200000LUX 2, ngosipụta dị elu: 0.1LUX / 0.01FC 3, Nhọrọ ntụgharị akpaaka 4. Tụọ ihe kachasị, ọrụ ndekọ kacha nta 5. Ntugharị LUX / FC unit 6. Ezubere ọgụgụ ọrụ mkpọchi, kpochiri ọnụego atụpụtara 7. Nchịkọta data nchịkọta akụrụngwa Nkọwapụta teknụzụ NKWUKWU MGBE AHANR AC AKW 200KWỌ 200LUX 0.1 ± 3% + 10dgts 2000LUX 1 ± 3% + 10dgts 20000LUX 1 ± 4% + 10dgts 200000LUX 1 ± 4% + 10dgts General njirimara. ..
YSD 130Isi Digital Digital Ọkwa Mita
Model: YSD130 Qualities: Coal Mine Safety Certificate Bọmbụ gbawara akaebe-Asambodo Nnyocha Asambodo Ngwa: YSD130 Digital Sound Level Meter bụ intrinsically mma na mgbawa-àmà na-egosi ngwá, karịsịa iji na-eme mkpọtụ nha n'ihi na ala m na nnyocha m nchekwa nnyocha. N'ezie, etinyere ya na mmụba ụda na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụlọ akwụkwọ, ọfịs, ohere okporo ụzọ na ụdị gburugburu ebe niile na-ada nha mkpa. Igodo ...
Multi-Function ventilashion Mita JFY-4B
Nlereanya ； JFY-4B Ngwa: JFY-4B Multi-Function Ventilation Meter bụ ihe nchekwa nchekwa na mgbawa na-agba agba, ọkachasị iji tụọ okpomọkụ, nrụgide dị iche, ọsọ ikuku na ịta nke gas methane. A na-eji ya na nguzogide ventilashị, HVAC na nyocha pipeline ọkachasị. Emere ngwa ahụ ahazi ahazi tupu ha ahapụ ụlọ ọrụ ahụ. Dị ka ogologo dị ka ị na-eji n'ụzọ ziri ezi, na ngwá nwere ike na-arụ ọrụ stably ruo ogologo oge. Key Feature: Ọ dị mfe ịgụ O ...
Multi-Function ventilashion Mita JFY-4
Nlereanya ； JFY-4 Ngwa: JFY-4 Multi-Function Ventilation Meter bụ ngwa nchekwa na mgbawa na-agba agba, ọkachasị nke atụ iji tụọ okpomọkụ, nrụgide dị iche, ọsọ ikuku na ịta gas gas. A na-eji ya na nguzogide ventilashị, HVAC na nyocha pipeline ọkachasị. Emere ngwa ahụ ahazi ahazi tupu ha ahapụ ụlọ ọrụ ahụ. Dị ka ogologo dị ka ị na-eji n'ụzọ ziri ezi, na ngwá nwere ike na-arụ ọrụ stably ruo ogologo oge. Key Feature: Ọ dị mfe ịgụ On-sc ...
Multi-Function ventilashion Mita JFY-6
Nlereanya: JFY-6 Multi ọrụ ventilashion mita zuru ụwa ọnụ ventilashion Meter ventilashion mita eruba mita Asambodo: Coal Mine Safety Certificate Mgbawa-àmà Asambodo Nnyocha Range: Ifufe ọsọ, okpomọkụ, esi mgbali, ikuku mgbali, iru mmiri, methane CH4 Ngwa: JFY -6 Multi-Function Ventilation Meter bụ ihe eji arụ ọrụ na nchekwa na mgbawa, nke ezubere iji tụọ nrụgide barometric, differentia ...